Kitaabka Quduuska ah, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Qorniinku waa Erayga Eebbe ee la waxyooday, marag murka aaminka ah ee Injiilka, iyo u gudbinta runta ah ee saxda ah ee muujinta Ilaah ee dadka. Marka tan la eego, Qorniinka Quduuska ah waa mid aan macquul ahayn oo aasaasi u ah Kaniisadda dhammaan su'aalaha wax dhigista iyo nolosha. Sideen ku garan karnaa Ciise inuu yahay iyo wuxuu Ciise baray? Sideen ku ogaan karnaa in injiilku run yahay ama been yahay? Maxaa aasaas u ah waxbarista iyo nolosha? Baybalku waa meesha laga soo galo lagana gudbi karo waxa doonista Eebbe noogu sheegay inaan garto oo yeelno. (2 Timoteyos 3,15:17 - 2; 1,20 Butros 21: 17,17; Yooxanaa)
Waxaa laga yaabaa inaad aragtay warbixinno wargeys ah oo ku saabsan "Seminary Ciise", koox aqoonyahanno ah oo sheeganaya in Ciise uusan oran waxbadan oo uu sheegay si waafaqsan Kitaabka Quduuska ah. Ama waxaad maqashay aqoonyahanno kale oo sheeganaya in Kitaabka Quduuska ahi yahay aruurin is burinaya iyo khuraafaad.
Dad badan oo aqoon leh ayaa diidaya Baybalka. Kuwo kale, si lamid ah kuwa wax bartay, waxay u tixgeliyaan inuu yahay sheeko lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan wixii Ilaah sameeyey iyo wuxuu yidhi. Haddii aanaan aamini karin wuxuu Kitaabka Quduuska ahi ka leeyahay cibaadada, markaa wax u hadhayaa ma jiraan wax aan ka ogaano isaga.
"Seminar-ka Ciise" wuxuu ku bilaabmay fikrad hore loo qaatay oo ah waxa Ciise bari lahaa. Waxay aqbaleen oo keliya hadalada ku habboon sawirkan waxayna diideen dhammaan wixii aan ku habboonayn. Markaad sidaas samaynaysid, waxaad ficil ahaan u abuurtay Ciise sawirkaaga. Tani waa mid si cilmiyaysan su’aal weyn uga taagan tahay xitaa saynisyahano badan oo xor ah ayaa ku khilaafsan "siminaarkii Ciise".
Ma waxaan haysannaa sabab wanaagsan oo aan aaminsanahay in xisaabaadka kitaabiga ah ee Ciise ay yihiin kuwo la aamini karo? Haa - waxaa la qoray dhowr iyo toban sano ka dib dhimashadii Ciise, markii markhaatiyaashu wali noolaayeen. Xerta yahuuddu waxay had iyo goor xusuustaan ​​ereyada macallimiintooda; aad bay u badan tahay in xertii Ciise ay sidoo kale ku gudbiyeen waxbariddooda Masterka si sax ah. Ma hayno wax caddeyn ah oo ah inay abuureen ereyo lagu xalliyo arrimaha Kaniisaddii hore, sida gudniinta. Tani waxay soo jeedineysaa in warbixinadooda ay si isku hallayn ah u soo saaraan wixii Ciise baray.
Waxaan sidoo kale u qaadan karnaa heer sare oo isku halleyn xagga gudbinta ilaha qoraalka. Waxaan haynaa qoraal gacmeedyo qarnigii afraad iyo qeybo yaryar oo ka yimid kii labaad. (Qoraalkii faylka ahaa ee ugu badbaaday ee Virgil waxaa la aasaasay 350 sano ka dib dhimashadii gabayga; oo Plato 1300 sano ka dib.
Ciise: marqaati furaha u ah Qorniinka
Ciise wuxuu diyaar u ahaa inuu kala doodo Farrisiinta arrimo badan, laakiin sida muuqata kuma koobna: aqoonsiga dabeecadda muujinta ee Qorniinka. Wuxuu had iyo jeer ku haystay aragtiyo kala duwan oo ku saabsan fasiraadaha iyo caadooyinka, laakiin sida muuqata wadaaddada Yuhuuddu waxay la heshiiyeen in Qorniinka uu yahay aasaaska awoodda aaminsanaanta iyo ficilka.
Ciise wuxuu filayay in eray kasta oo Qorniinku rumoobo (Matayos 5,17: 18-14,49; Markos). Wuxuu ka soo xigtay Qorniinka si uu u taageero hadaladiisa (Matayos 22,29:26,24; 26,31:10,34;; Yooxanaa); Wuu canaantay dadka si aan buugaag u akhriyin (Matayos 22,29:24,25; Luukos 5,39; Yooxanaa). Wuxuu ka hadlay dadka Axdiga Hore iyo dhacdooyinka iyagoon tilmaam yar u lahayn oo aysan jiri karin.
Qoraallada ka dambeeya waxay ahayd awoodda Ilaah. Ciise wuxuu ka hor tegey jirrabaadda Shaydaanka: "Waa qoran tahay" (Matayos 4,4: 10). Xaqiiqada kaliya ee ah in wax la qorey waxay ka dhigtay mid aan macquul ahayn amar u qaadis xagga Ciise. Erayadii Daa'im waxaa soo dejiyey Ruuxa Quduuska ah (Markos 12,36); wax sii sheegid ayaa la siiyay "iyada oo loo marayo" Daanyeel (Matayos 24,15) maxaa yeelay Ilaahay asalkoodu waa run.
Matayos 19,4: 5-1, Ciise wuxuu yidhi Abuuraha wuxuu ku hadlayaa Bilowgii 2,24: "Sidaas darteed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa, oo labaduba waxay noqon doonaan isku jidh." Si kastaba ha noqotee, sheekada abuuristu ereygan kama sheeganayso Ilaah. Ciise wuxuu u sifeyn karaa Ilaah si fudud sababtoo ah waxay ku jirtay Qorniinka. Qiyaasta hoose: qoraaga dhabta ah ee Qorniinka waa Ilaah.
Waxay ka muuqataa Injiillada oo dhan inuu Ciise tixgeliyay Qorniinka oo la isku hallayn karo oo lagu kalsoonaan karo. Wuxuu ka hor yimid dadkii doonayay inay isaga dhagxiyaan: "Qoraalka lama jabin karo" (Yooxanaa 10:35). Ciise wuxuu u arkay iyaga inay si buuxda ansax yihiin; xitaa wuxuu difaacay ansaxnimada amarradii Axdiga Hore inta Axdigii Hore weli weli dhaqan galayay (Matayos 8,4: 23,23;).
Sida macallinkooda oo kale, rasuulladu waxay tixgeliyeen amar qoraal oo qoraal ah. Had iyo jeer way ka soo xigan jireen, badiyaa inay taageeraan fikradda. Erayada Qorniinka waxaa loola dhaqmay sidii ereyada Ilaah. Qorniinku xitaa waa shaqsiyan sidii Ilaaha kula hadlay Ibraahim iyo Fircoon hadalka hadalka (Rooma 9,17; Galatiya 3,8). Wixii Daa'uud iyo Ishacyaah iyo Yeremyaah qoreen runtiisuu ku hadlay Eebbe sidaa darteedna waa hubaal (Falimaha Rasuullada 1,16; 4,25; 13,35; 28,25; Cibraaniyada 1,6-10; 10,15). Sharciga Muuse, waa la malaynayaa, inuu ka tarjumayo maanka Ilaah (1 Korintos 9,9). Qoraaga dhabta ah ee Qorniinka waa Ilaah (1 Korintos 6,16:9,25; Rooma).
Bawlos wuxuu ugu yeedhay Qorniinka in "waxa Ilaah ku hadlay" (Rooma 3,2). Sida laga soo xigtay Butros, nebiyadu kama hadlin "doonista aadanaha", laakiin taa bedelkeeda, waxaa waday Ruuxa Quduuska ah, dadku waxay ku hadlayeen magaca Ilaah " (2 Butros 1,21). Nebiyadu iyaga laftoodu iskama ay soo bixin - Ilaah baa iyaga siiyey, isagu waa qoraaga dhabta ah ee ereyada. Waxay had iyo jeer qoraan: "Oo haddana Eraygii Rabbiga ayaa soo baxay ..." ama: "Rabbigu wuxuu leeyahay ..."
Bawlos wuxuu u qoray Timoteyos: "Dhammaan Qorniinka oo dhan waxaa laga soo dejiyey Ilaah, waxayna waxtar u leeyihiin baridda, xukummada, asluubta, iyo edbinta xagga xaqnimada ..." (2 Timoteyos 3,16, Elberfeld Bible). Si kastaba ha noqotee, waa inaanan ku dhex akhriyin fikradeenna casriga ah ee waxa "Ilaah-ku afuufay" yahay. Waa inaan xasuusnaano in Bawlos uu ula jeeday tarjumida Septuagint, tarjumaada Griigga ee Qorniinka Cibraaniga (taasi waxay ahayd Qorniinka uu Timothy ogaa tan iyo carruurnimadiisii ​​- aayadda 15). Bawlos ereygan ayuu u adeegsaday sidii Erayga Ilaah, isaga oo aan odhanaynin waa qoraal dhammaystiran.
In kasta oo ay turjumidda khaladaadku jirto, haddana xagga Eebbe baa ku anfacaysa waxtarna u leh "waxbarashada xaqnimada" waxayna keeni kartaa in "ninka Ilaah qumman yahay, oo loo soo diray shuqul kasta oo wanaagsan" (Aayadaha 16-17).
Erayga asalka ah ee Eebbe waa qumman yahay Ilaahayna wuxuu hubin karaa in dadku ku ridaan ereyada saxda ah, inay si sax ah u hayaan (si loo dhammeeyo wada xiriirka) in ay si sax ah u fahmaan. Si kastaba ha noqotee, Ilaah sidan uma uusan samayn oo gabi ahaanba. Nuquladayadu waxay leeyihiin khaladaadka naxwe ahaan iyo qoraalka, iyo (taas oo aad uga muhiimsan) waxaa jira khaladaad ku jira helitaanka farriinta. Ilaa xad, "buuqa asalka" ayaa naga hortaagan inaan maqalno ereyga uu sida saxda ah u galay. Hase yeeshe, Ilaah wuxuu adeegsadaa Qorniinka si uu maanta noola hadlo.
In kasta oo "buuq" ah, in kasta oo khaladaadka aadanaha ee dhexmara annaga iyo Ilaah, Qorniinku wuu fuliyaa ujeeddadiisa: inuu inooga sheego badbaadada iyo dhaqanka saxda ah. Ilaah wuxuu ku gaadhayaa wuxuu doonayay Qorniinka: Wuxuu ereygiisa noogu soo dhawaanayaa si cad oo nagu filan oo aan ku gaari karno badbaado iyo inaan la kulanno waxa uu inaga codsado.
Qorniinku wuxuu fuliyaa ujeedkan, sidoo kale qaab tarjuman. Si kastaba ha noqotee, waan ku guuldaraystay haddii aan ka fileynno wax iyada ka badan kan Ilaah ugu talogalay. Maahan buug-buugeed ku saabsan cilmiga xiddigiska iyo cilmiga dabiiciga. Tirooyinka ku jira font had iyo jeer ma ahan kuwo xisaabta ku saleysan heerarka maanta. Waa inaan raacno ujeeddada weyn ee Qorniinka oo aan ku mashquulin waxyaalaha yaryar.
Tusaale: Falimaha Rasuullada 21,11 Agabus wuxuu galay inuu yiraahdo Yuhuuddu waxay xirayaan Bawlos oo waxay u dhiibeen kuwa aan Yuhuudda ahayn. Qaar baa u qaadan kara in Agabus cayimay cidda xidhxidhay Bawlos iyo waxay isaga ku samayn doonaan. Laakiin markay noqotay, ayaa waxaa badbaadiyey Bawlos kuwa aan Yuhuudda ahayn oo quruumuhu ku xidhxidheen (Aayadaha 30aad).
Tani ma khilaaf baa? Farsamo ahaan haa. Waxsii sheegiddu waxay ku saxsanayd mabda'a, laakiin kuma jirin faahfaahinta. Dabcan, markii Lukas uu qorey, wuxuu si sahlan u sheegi karay sheegidda si uu ugu ekaado natiijada, laakiin iskuday isku dayin inuu daboolo khilaafaadka. Ma uusan fileynin akhristayaasha inay ka filayaan saxitaanka faahfaahinta noocaas ah. Tani waa inay nooga digtoon tahay filashada saxnimada ee faahfaahin kasta oo Kitaabka ah.
Waa inaan eegnaa qodobka ugu weyn ee farriinta. Sidoo kale, Bawlos wuxuu qalad sameeyay markii uu qoray 1 Korintos 1,14:16 - qalad uu saxay aayadda. Fureyaasha waxyooday waxay ku jiraan khaladka iyo sixitaanka labadaba.
Dadka qaar waxay isbarbardhigayaan Qorniinka Ciise. Mid waa Ereyga Eebbe oo ku hadla luqadda aadanaha; tan kalena waa Erayga jidh ahaaneed ee Eebbe. Ciise wuu ku fiicnaa dareenka ah inuusan dambi lahayn, laakiin taa micnaheedu maahan inuusan waligiis khaladaadin. Caruurnimadiisa, xitaa markuu yahay qof weyn, wuxuu sameyn lahaa qaladaad naxwe ahaan iyo qaladaar nijaar ah, laakiin khaladaadka noocaas ah ma aheyn dembiyo. Iyaga kama aysan joojin Ciise inuu oofiyo ujeedkiisa - si ay dhibbanayaashu dembila'aan u noqdaan. Si la mid ah, khaladaadka naxwe ahaan iyo faahfaahinta kale ee yar-yar ayaan wax u dhimayn macnaha Kitaabka Quduuska ah: noo horseed gaadhitaanka badbaadada xagga Masiixa.
Qofna ma cadeyn karo in waxa Kitaabka Quduuska ah oo dhammi run yihiin. Waxaad awood u yeelan kartaa inaad caddeyso in wax sii sheegiddu ay run noqotay, laakiin ma caddayn kartid in Kitaabka Quduuska ah oo dhan uu isku mid yahay. Waa su’aal ka badan aaminaada. Waxaan aragnaa caddeyn taariikhi ah oo ah in Ciise iyo rasuulladii ay u arkeen Axdiga Hore sidii Ereyga Ilaah. Kitaabka Quduuska ah ee Ciise waa midka keliya ee aan haysanno; fikradaha kale waxay ku saleysan yihiin mala-awaal, maahan caddeyn cusub. Waxaan aqbalnay waxbarista Ciise in Ruuxa Quduuska ah uu xerta ku hagi doono runta cusub. Waxaan aqbalnaa sheegashada Bawlos ee ah inaan ku qorno awood rabaani ah. Waxaan aqbalnaa in Kitaabka Quduuska ahi uu ina tusay cidda Ilaah yahay iyo sida aan isaga u yeelan karno wehel.
Waxaan aqbalnaa maragga taariikhda kaniisadda in qarniyo badan masiixiyiinta ay Kitaabka Quduuska ah u arkeen mid waxtar u leh iimaanka iyo nolosha. Buugani wuxuu noo sheegayaa qofka Ilaah yahay, wuxuu isagu nagu sameeyey, iyo sida aan wax uga qaban karno. Dhaqanku wuxuu kaloo noo sheegayaa buugaagta ku jira buugga kitaabiga ah. Waxaan ku kalsoonahay Ilaah inuu ku hago hannaannada canonization si natiijada u ahayd isaga doonistiisa.
Khibradeena gaarka ah sidoo kale waxay ka hadlaysaa runta Qorniinka. Buuggu ma yarayn karo ereyada wuxuuna na tusayaa dembiyadeenna; Waxay kaloo na siisaa nimco iyo damiir cad. Waxay ina siisaa awood damiir ahaan maahan sharciyo iyo amarro, laakiin hab lama filaan ah - nimco iyo dhimashadii ceebta ahayd ee Eebaheen.
Baybalku wuxuu ka marag kacayaa jacaylka, farxadda, iyo nabadgelyada aan ku haysan karno iimaan - dareeno ah, sida Kitaabka Quduuska ahi wax u qoro, oo ka sarreeya awooddayada aan erayga ku ridanno. Buugani wuxuu ina siinayaa macnaha iyo ujeeddada nolosha isagoo noo sheegaya wax ku saabsan abuurista rabbaaniga ah iyo badbaadada. Dhinacyadan awoodda kitaabiga ahi lama xaqiijin karo kuwa shakiga qaba, laakiin waxay gacan ka gaystaan ​​xaqiijinta Qorniinka nooga sheegaya waxyaalaha aan la kulanay.
Kitaabku ma qurxiyo geesiyaasha; Tani waxay sidoo kale naga caawineysaa inaan u aqbalno iyaga si lagu kalsoonaan karo. Waxay ka hadlaysaa daciifnimada aadanaha ee Ibraahim, Muuse, Daa'uud, reer binu Israa'iil, xerta. Kitaabka Quduuska ahi waa eray marag ka ah eray amarro badan leh, ereyga aan dabiiciga ahayn, iyo warka wanaagsan ee nimcada Ilaah.
Kitaabka Quduuska ah ma aha wax fudud; uma sahlana nafteeda. Axdiga Cusubi wuxuu sii wadaa axdigii hore dhinaca kale wuuna ku jabiyaa dhinaca kale. Way fududaan lahayd in gebi ahaanba la sameeyo iyada oo aan mid ama mid kale la samayn, laakiin way adag tahay in labadiinuba yeeshaan. Sidoo kale, Ciise waxaa lagu muujiyey inuu yahay nin iyo Ilaah isku waqti, isku dar ah oo aan dooneynin inuu sifiican ugu ekaado Cibraaniga, Griiga ama fikirka casriga ah. Isku ekaantaan looma abuurin jaahilnimada dhibaatooyinka falsafadda, laakiin iyaddoo laga duulayo.
Kitaabka Quduuska ahi waa buug dalbanaya, waxaa si dhib yar u qori kari waayey deggeneyaasha aan aqoonta lahayn ee doonayay inay been sheegaan ama ka dhigaan waxyaabaha malooca ah. Sarakiciddii Ciise ayaa culays ku kordhisay buugga sheegaya dhacdadan oo kale. Waxay culays ku sii darsataa maragga xertiisii ​​ee kii Ciise ahaa - iyo caqligii lama filaanka ahaa ee laga gaadhayo dhimashada dhimashada dhimashada wiilka Ilaah.
Kitaabka Qudduuska ah wuxuu si isdaba joog ah u weydiiyaa fekerkeena ku saabsan Ilaah, nafteena, nolosha, saxda iyo baadilka. Waxay u baahan tahay ixtiraam maxaa yeelay waxay na siinaysaa runta aynaan meel kale ka heli karin. Marka lagu daro dhammaan tixgelinta teori, Kitaabka Qudduuska ahi wuxuu "xaq ka dhigaa" naftiisa isaga oo ka sarreeya dhammaan codsigiisa nolosheena.
Marqaatiga Qorniinka, dhaqankiisa, waaya-aragnimadiisa, iyo sababtuna waxay taageertaa sheegashada Kitaabka Quduuska ah. In ay ka hadasho xuduudaha dhaqameed, in ay wax ka qabato xaaladaha aan ka jirin xilligii loo qoondeeyay - tan waxaa sidoo kale ka marqaati kacaysa awooddeeda sii socota. Caddaynta ugu wanaagsan ee Baybalka ee rumaystaha, si kastaba ha noqotee, waa in Ruuxa Quduuska ahi beddeli karo maskaxda oo uu nolosha ka beddeli karaa salka hoose.